Barlamanka oo wax ka badelay xeer 12 Nov 12, 2012 - 7:48:37 AM
Mudanyaasha Barlaamanka Puntland ayaa ansixiyey qodobo wax laga badeley Xeerka Diiwaagelinta Ururada iyo Xisbiyada siyaasada Puntland.
Guddiga Doorashooyinka Puntland ayaa u soo gudbiyey horey golaha codsiga wax ka bedelka xeerka ururada iyo axsaabta siyaasada oo ay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen kadib markii goluhu in badan ka doodey qodobadaasi.
Qodobadda 2-aad ,3-aad iyo 8-aad ayay ahaayeen kuwa wax laga badalay xeerka ururada siyaasada ,waxana ay ahaayen qodobadu:
Qodobka 2-aad Qabashada Codsiyada Diiwaagelinta 2.2 Xarafka T: Liiska magacyada asaasayaasha urur/xisbi iyo liiska guddiga fulinta ee ku meel gaarka ah.Golaha Dhexe ee urur/xisbi waxa laga doonayaa shirweynaha ugu horeeya ee ururka/xisbiga.
2.2 Xarafka Kh : Urur kasta waa inuu keenaa cadayn bixinta diibaaji dhan $7.500 (Todobadda kun iyo shan boqol oo doollar) oo aan celis lahayn .Lacagta deebaajiga ah waa dakhli dowladeed ,Waxaana lagu shubayaa Bangiga Dhexe ee Puntland.
2.2 Xarafka D: Xisbi kasta waa inuu keeno cadayn bixinta diibaaji dhan $15.00 (Shan iyo Tobban kun oo doollar) oo aan celis lahayn .Lacagta deebaajiga ah waa dakhli dowladeed ,Waxaana lagu shubayaa Bangiga Dhexe ee Puntland.
Qodobka 3-aad Ururada/Xisbiyada Siyaasadeed ee ku-meelgaarka ah
T: Si urur loo sharciyeeyo waa inuu xarumo ku leeyahay ugu yaraan 5-Gobol oo ka mid ah 8-da Gobol ee Puntland ,waana in ay uga diiwaangashan yihiin 300 (Saddex Boqoll) oo taageere/cod-bixiye, ururka isku bedela xisbi waa inuu xafiisyo ku yeeshaa dhamaan 8-da Gobol ee Puntland.
Degmooyinka dalka 1- Dhamaan 37-da degmo ee Puntland doorashooyinka deegaanka waa loo qorsheynayaa inay ka dhacaan meesha ay ka dhici karto , waxaana loo samaynayaa Golayaal deegaan meeshii qaadan karta, mashaariicda horumarinta deegaanada Puntland oo dhan waa u simanyihiin.
2- Inta laga samaynayo Tirokoob dadweyne oo sugan waxaa Xildhibaanada Baarlamaanka Axsaabtu ugu tartamayaan Gobolk walba tiradii Xildhibaanada ee uu horey u lahaa, waxaana lagu qeexi doonaa Xeerka Doorashada Golaha Wakiilada ee ay soo gudbin doonaan Guddiga Doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland.
Fadhigii lagu ansixyey ayaa waxa fadhiyey 43 mudane oo uu shir gudoominayey Gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cadirashiid Maxamed Xirsi.